The Ānanda | Research Articles
Home Articles Tools Budget Basics arrow_drop_down
The Ānanda Home Articles Tools Budget Basics arrow_drop_down
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းဥပဒေကြမ်းအား နိုင်ငံတကာအလေ့အထများဖြင့် နှိုင်းယှဉ် ခွဲခြမ်းလေ့လာခြင်း
Posted in Legislative Research on Jun 06, 2019
တာဝန်မှရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုတာ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီပုံစံ တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကို သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင်ကာလမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖယ်ရှားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ရွေးကောက်ပေးလိုက်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို အမြဲမပြတ် တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခြင်းကိစ္စဟာ အပြန်အလှန် ဆက်စပ်နေပါတယ်။
Summary: Myanmar Medical Degree, Diploma and Certificates Bill
Posted in Legislative Research on Jun 04, 2019
The universities, colleges and courses that can give medical degrees, diplomas and certificates are those established by The University Education Law of 1973; universities, colleges and courses under the Ministry of Health and Sports and the Ministry of Defence; and private universities, colleges and courses permitted by the Ministry of Health and Sports.
Isadaily oath the best way to improve the impartiality and independence of the judiciary?
Posted in Legislative Research on May 28, 2019
Aiming to further improve the impartiality and independence of the Judiciary in Myanmar, the Union Judiciary Law had been frequently amended by the Hluttaw: in 2013, 2014 and 2015. A further fourth Amendment Bill has now been introduced in 2019.
Backgrounder: Industrial Zone Bill
Posted in Legislative Research on May 23, 2019
The aim is to attract companies to establish their operations inaparticular area, by reducing their costs of doing business through tax reliefs, provision of good quality infrastructure, and easy access to raw materials and labour.
ဘဏ္ဍာနှစ်အပြောင်းအလဲရဲ့ ပထမသုံးလ မျက်နှာပန်းလှခဲ့သလား
Posted in Budget Transparency on May 23, 2019
အခုဆိုရင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အချိန်ပြောင်းလဲမှု ကျင့်သုံးတာဟာ ခြောက်လကျော် သက်တမ်းကို ရောက်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေရဲ့ ပထမ သုံးလပတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကနေ ဒီဇင်ဘာလအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်းလဲရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဘယ်လောက်အထိ ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဆန်းစစ်တိုင်းတာကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ စီမံကိန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လမှာ ပြည်ထောင်စု၊ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရ တွေရဲ့ ပထမ သုံးလပတ် အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာပါ ဘဏ္ဍာငွေ လျာထားချက်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဆန်းစစ်တိုင်းတာကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသန္တရအမိန့်အောက် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး
Posted in Legislative Research on May 21, 2019
ကယားပြည်နယ်က ဒေသန္တရအမိန့်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာအရရော၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုထားတဲ့ ငြိမ်း၊စု၊စီ ဥပဒေ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သွေဖည်နေသလို အများပြည်သူ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် ဒေသအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ကြိုတင်တားမြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့လာရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရော၊ ငြိမ်း၊စု၊စီ ဥပဒေရောဟာ အသက်မဝင်တော့တဲ့ အပြင် နိုင်ငံသားတွေဟာလည်း နစ်နာနေရပါတယ်။
ဥပဒေကြမ်း အနှစ်ချုပ် - စက်မှုဇုန်ဥပဒေကြမ်း
Posted in Legislative Research on May 15, 2019
စက်မှုဇုန်တည်ထောင်ရာမှာတော့ စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်မြေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ မှ ၇၀ အထိ၊ ကုန်သွယ်မှုနယ်မြေအတွက် ၁ ရာခိုင်နှုန်း မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ၊ စက်မှုဇုန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အကူပြုအသုံးချနယ်မြေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ မှ ၂၅ အ ထိ၊ စိမ်းလန်းနယ်မြေအတွက် ၉ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်စေရပါမယ်။
ဥပဒေကြမ်း သုံးသပ်ချက် - လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း
Posted in Legislative Research on May 09, 2019
နိုင်ငံတကာမှာတော့ တာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကို မြို့နယ်အဆင့်၊ပြည်နယ်အဆင့် လွှတ်တော်များတွင် အများအားဖြင့်တွေ့ရသော်လည်း နိုင်ငံတော်အဆင့်(ပြည်ထောင်စုအဆင့်) မှာတွေ့ရခဲပါတယ်။ ဒီလိုတာဝန်မှရုပ်သိမ်းခြင်းမျိုးဟာ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ဥပမာအချို့ရှိပေမဲ့လို့ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများအရ တာဝန်ခံမှုကို တိုးတက်စေရာမှာ ထိရောက်မှုမရှိသလို နိုင်ငံရေးအရထိုးနှက်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ အလွယ်တကူအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြနေပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ နှစ်ဆနီးပါး ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးထားတဲ့ ကယားအစိုးရ
Posted in Budget Transparency on May 07, 2019
ပြည်နယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေထက် နှစ်ဆနီးပါးကို ကယားပြည်နယ်အစိုးရက အခုလိုမျိုး ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေမှာ သုံးစွဲနေတာက ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအားနည်းလို့ အခြားပြည်နယ်တွေထက် ပိုမိုရရှိနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေရရှိမှုကိုပါ ဘာသာရေးအတွက် ထည့်သွင်းသုံးစွဲနေ တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးရေးအားနည်းပြီး အစိုးရရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေမှာ သုံးစွဲနေတဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Factcheck: Did Hluttaw cut Electricity and Energy Ministry’s budget substantially?
Posted in Budget Transparency on Apr 30, 2019
And the ministry is the one that’s surrendering the underspent budget to the General Reserve Fund which is the account for underspent budget, according to reports of Joint Public Accounts Committee of the Pyidaungsu Hluttaw. The underspent budget amounts to around 300 billion MMK each year.
Copyright © Ānanda Data 2021